Mogadishu Journal » Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Xaaf oo magacaabay Golihiisa Wasiirada
Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Xaaf oo magacaabay Golihiisa Wasiirada
Mjournal :-Madaxweynaha Maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa caawa magacaabay Golihiisa Wasiiradda, kaddib wadatashi uu muddooyinkii u dambeeyay ka waday magaalada Dhuusa-Mareeb.
Golaha wasiirada cusub ee Galmudug ayaa ka kooban 25 wasiir oo labo kaliya ay Haween ka yihiin, waxaana ka dhex muuqda xubno horay uga tirsanaa Golihiisa Wasiirada iyo kuwa cusub.
Magacaabidan ayaa sida muuqata lagu saleeyay awood qeybsiga beelaha deegaanada Galmudug, iyadoo ay sii dheer tahay in xubnaha muhiimka ee Wasaaradaha ay ku leeyihiin Ahlusuna.
Labadii maalmood ee la soo dhaafay ayaa waxaa ka jirtay Dhuusamareeb xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay magacaabida Golaha Wasiirada oo uu waday Madaxweyne Xaaf, waxaana ka biya diidanaa xubno ka tirsan Baarlamaanka.
Magacaabida Golaha wasiiradan Galmudug ayaa ku soo aadeysa, iyadoo weli khilaaf ka dhex taagan yahay Madaxda Galmudug ee ku kala sugan Dhuusamareeb iyo Cadaado, kuwaasoo horay labada dhinac xil ka qaadis iska soo horjeeda ay isku sameeyeen.
Khasaaraha ka dhashay qaraxyadii ka dhacay magaalada Baydhabo
Madaxweynaha Soomaaliya oo gaaray magaalada Marko